Dowlada Iran Oo sheegtay In Aanay Muwaadiniintoodu Tagi Doonin Xashka Sanadkan | Hawraar
Dowlada Iran Oo sheegtay In Aanay Muwaadiniintoodu Tagi Doonin Xashka Sanadkan
Dowlada wadan Iran ayaa sheegtay in ay muslimiinta dalkeeda ayna sanadkan tegi doonin boqortoyada Sacudi Carabiya in ay ku soo gutaan waajibaadka xajka kadib markii wadahadal u dhexeeyay labada dal uu guuldareystey.
Wakaalada wararka ee Iran ee Irna ayaa qortay in wasiirka dhaqanka iyo hanuuninta Iran Ali Jannati uu sheegay in mas’uul ka tahay boqortoyada Sacudi Carabiya burburka wadahadalada inkastoo weli aysan ka hadli boqortoyada Sacudi Carabiya.
Xidhiidh labada dal ayaa xumaaday kadib markii horaantii sanadkan boqortoyada Sacudi Carabiya ay xukun dil ah ku fulisay wadaadka shiicada ah ee Nimr Al Nimr.
Dowlada Sacudi Carabiya ayaa xidhiidhka u jartay dowlada Iran joojisayna duulimaadyadii ka imanayay dalka Iran kadib markii dad cadheysan oo Iraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaarada ay Boqortoyada Sacudiga ku lahayd dalka Iran.
Sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa inkabadan 450 Iraaniyiin ah waxa ay ku dhinteen xajka kadib markii dadku ay isku cidhiidhyeen hase yeeshee xukuumada Iran ayaa ku eedeysay Sacudi Carabiya inay mas’uuliyada qaadeyso maadaama ay maamul xumo ka dambeysay dhimashada dadka xujayda ahaa.
Labada dowladood ayaa ku guuldareystey inay ka heshiiyaan arrimaha ammaanka ee xajka iyo weliba dalkugalka ay u baahan yihiin dadka xujayda ah.
Boqortoyada Sacudi Carabiya maadaama aysan ku lahayn safaarad dalka Iran ayaa waxa ay codsatay in dal saddexaad ay u safraan xujayda si ay u helaan dalkugalka ama fiisaha.
Balse dowlada Iran ayaa doonaysa in xujaydeeda ay ka qaataan dalkugalka safaarada Swisska ee magaalada Tehran taas oo ah safaarada ugaga mas’uulka ah Sacudi Carabiya danaha uu ku leeyahay Iran tan iyo markii uu burburay xidhiidhka labada dal.
Shacabka dalka Iran oo u badan Shiico iyo Boqortoyada Sacudi Carabiya oo Sunni ah ayaa waxa ay si aan toos ahayn colaad ugaga dhexeysaa iyadoo dowlad walba ay kala taageerto dhinacyada isaga soo kala horjeeda ee Siiriya iyo Yemen.